Blog | ulinkmyanmar
EIU ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များအရ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကမ္ဘာ့အဆင့် (၂) အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရ
စင်ကာပူကို ဂျပန်နိုင်ငံပြီးနောက် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခြားအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားက အဆင့် ၁၅၊ တရုတ်က အဆင့် ၄၇၊ ဗီယက်နမ်က အဆင့် ၅၇၊ မလေးရှားက အဆင့်၈၇၊ အင်ဒိုနီးရှားက အဆင့်၉၂၊ ထိ...
ဒီဇင်​ဘာမှာ ကျန်းမာ​ရေး​စစ်​​ဆေးလိုသူများအတွက်​ မရလိုက်​ မဖြစ်​​စေရန်​ ယခုပင်​ စာရင်း​ပေးလိုက်​ပါ…
ဒီဇင်ဘာလမှာ ခွင့်ရက်ရှည်ရတာကြောင့်အပြင် အာမခံအတွက် သက်တမ်းတိုးဖို့လိုတာကြောင့်အများစုဟာ ဒီဇင်ဘာမှာ နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်လိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာလဟာ ခရီးသွားရာသီဖြစ်တာနဲ့အညီ အလွန်ကြပ်တည်းတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့် ခုကတည်းက ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားပါမှ စိတ်...
IUI (intrauterine insemination) ဆိုတာ သားအိမ်ထဲကို သုတ်ပိုးတမင်တကာ ထည့်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ သားသမီးရအောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သန်မာအားကောင်းတဲ့ သုတ်ပိုးတွေပါတဲ့ သေးငယ်ပျော့ပြောင်းတဲ့ပြွန်လေးကို သားအိမ်အဝကတဆင့် သားအိမ်ထဲကို ထိုးသွင်းရပါတယ်။ သဘာဝနည်း၊ Clomid (clomiphene citrat...
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Raffles ဆေးရုံကြီး၏ နှစ် ၄၀ပြည့်မြောက်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Raffles ဆေးရုံကြီး၏ နှစ် ၄၀ပြည့်မြောက်ခြင်းအတွက် အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း ကျွန်မတို့ Ulinkမှ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်ရှင်။
Health screening package ဈေးနှုန်းများ
မြန်မာပြည်မှ စင်ကာပူသို့ သွားရောက်ဆေးစစ်လိုသူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ health screening package ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Ulink နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဆေးရုံသုံးရုံ (Raffles Health Screeners, Life scan @ Paragon, Health Connexion @ Farrer Park ) အနက်မှ မိမိနှင်...
စင်ကာပူသို့ သွားရောက်ဆေးကုသခြင်းမှာ သင်ထင်ထားသည်ထက် အများကြီးသက်သာပါတယ်
Ulink ဧည့်သည်တော်များ၏ တောင်းဆိုမှုအများဆုံး ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ငါးမျိုး၏ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ကို
“ဘန်ကောက် နှင့် စင်ကာပူ” နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1. Published bill sizes (50th percentile) based on average length of...
Pap smear အ​ကြောင်းသိ​ကောင်းစရာ
၁) Pap Smear ဆိုတာဘာလဲ???
သားအိမ်ခေါင်းအဝမှ ဆဲလ်များကိုယူ၍ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ( Cervical Cancer ) နှင့် ဆက်နွယ်နေသော မူမမှန်သည့်ဆဲလ်များရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်သော အလွန်ပင် ရိုးရှင်းလျှင်မြန်သည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂) ဘယ်လောက်ထိ တိကျမှုရှိပါသလဲ???
HPV ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
၁) HPV ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။
Human Papilloma Virus (HPV) ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြွက်နို့ကဲ့သို့ အနာများကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ အမျိုးအစား ၁၆ နဲ့ ၁၈ တွေဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ ၇၀% ထိကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တေ...
ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ လှပသော အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ အတွက်…
မိမိ​နဲ့ သင့်​​လျော်​​သော ဗီတာမင်​ကို ​သောက်​သုံးပါ
စင်​ကာပူမှ ​ရေးသား​​​သော ​ဆောင်းပါးအရ (link) လိုအပ်​​သော ဗီတာမင်​ ၃ မျိုးမှာ-
ထို့ပြင်​ မိမိနှင့်​ သင့်​​လျော်​​သော အသားအ​ရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်​ရာ ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်း နှင့်​ ကာကွယ်​ခြင်းများလည်း လိုအပ်​ပါတယ်။